Jadwalka doorashada Maraykanka - BBC News Somali
Jadwalka doorashada Maraykanka
7 Nofembar 2016
Waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa si kooban waqtiyada ugu muhiimsan ee doorashada Mareykanka, xilliga ay doorashada bilaabaneyso iyo marka ay xirmeyso, goorta lagu dhawaaqi doono gobolada laysku haysto iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee aan ku ogaan karno cidda guuleysata.
Dadka Mareykanka ayaa doorashada u dareeri doono talaadada 8 bisha November, si ay u doortaan madaxweyne cusub. Ra'yi aruurin laga qaaday dadweynaha Maraykanka ayaa muujineysa in aad laysugu dhaw yahay.
Halkan waxaan idinkugu soo gudbineynaa wakhtiyada dhacdooyinka waa weyn ee lagu ogaan doono cidda noqoneysa madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka. Waqtiyada oo dhan waaa GMT.
Image caption New Hampshire waa gobolka ugu horreeya ee natiijadiisa la oggaan doono
Goormee codeynta bilaabaneysaa?
Marka la aado dhinaca galbeed ee dalka, ayey gobolada kale codeynayaan maalinta oo dhan, iyadoo galbeedka Alaska iyo Hawaii ay codeyntooda bilaabaneyso 1700GM.
Marka doorashada dalka oo dhan soo xiranto, ayaa natiijada hordhaca ah la filayo ay sii deyn doonaan TV-yada Mareykanka iyo hey'adaha kale ee wararka, waxayna BBC-da tabin doontaa marka ay gobolada ka sheegaan shabakada wararka ee ABC.
Kuwani waxay ku saleysan yihiin cabiraadda ra'yiga dadweynaha ee la sameeyay maalintii oo dhan, balse aan la sii deyn ilaa inta ay doorashada ka xirmeyso, si aysan saameyn ugu yeelan cod bixiyayaasha.
Haddii gobol aad laysugu dhawaado, lama sheegayo saadaasha gobolkaasi. Waxaana dib laga xaqiijin doonaa natiijada marka codeynta oo dhan xiranto.
Goormee ayeynu ogaaneynaa natiijooyinka ugu horeeya?
Saddex magaalo oo gobolka New Hampshire ah ayay dhaqanka codeyntoodu caadi aheyn. Doorashada, ayaa furanta 05:00 subaxdii, waxyar kaddibna waa xirantaa. Waxaan sidaasi oo kale sameeya oo codeeya inta ay hal mar isu yimaadaan cod bixiayaasha magaalooyinka Dixville, Harts Location iyo Millfield si degdeg loogu ururiyo natiijada. Magaalooyinka waxaa la sheegi karaa natiijada 24 saac ka hor dalka intiisa kale.
Goormee ayeynu heleynaa natiijooyinka ugu muhiimsan?
Habeen barka ayey soo bixi doontaa natiijada, gobolka Florida ayaana ah kan ugu weyn ee aadka laysugu dhawyahay doorashada.
Florida waa muhiim, maxaa yeelay dadka badan ee ku nool ayaa ka dhigaya inay yeelato 29 u codeyneysa madaxweynaha, waana in ka badan 10% tirada guud ee loo baahan yahay in lagu guuleysto doorashada.
Xisbiga Dimuqraadiga wuxuu haysta gobolo ka badan kan Jamhuuriga, sidaa daraadeed Hillary Clinton waxay u baahan tahay si ay u guuleysato inay ka hesho in yar gobolada laysku dhowyahay. Haddii ay guuleysato, waxay noqoneysaa jid dheer oo horay ugu riixayo dhinaca 270-ka cod ee lagamamaarmaanka ah.
Image caption Natiijooyinka Florida waxay muhiim u yihiin go'aan ka gaarida natiijada madaxtinnimada
Florida waa gobol aad laysugu dhowyahay, waana adag tahay in la saadaaliyo halka ay u codeyn doonaan. Gobolka waxaa deggan cod bixiyayaal badan oo Hispanic ah oo taageera Dimuqraadiga, inkastoo tiro badan oo dadka codkooda dhiibanaya oo asalkoodu Cuba yahay ay u janjeeraan xisbiga Jamhuuriga.
Natiijada gobolka News Hampshire, ayaa sidoo kale waqtigan diyaar ah. Waa gobolka kaliya ay ku xooggan yihiin Diqmuraadiga ee waqooyi bari, inkastoo Jamhuuriga ay heli karaan cododka Maine oo uu Trump ku guulesan karo, waxayna astaan u noqoneysaa in dhankiisa ay u wareegto rajada oo wadanka oo dhan saa noqdo.
Ohio ayey codeynta xirmeysa 00.30GMT. Waana gobol kale oo aad laysugu dhowyahay oo ah meel uu dhaqaalaha hoos u dhacay. Mowduucyada ugu adag, ayaa ah soogalootiga iyo shaqooyinka.
Lahaanshaha sawirka Jeff Swensen
Image caption Ohio waa mid ka mid ah gobollada sida wayn loogu dagaalamo
Ohio ayaa looga codeeyay ruux kasta ee ku guuleysatay doorashooyinka ilaa 1964tii, taasi oo ah 13 doorasho oo isku xigay, sidaas daraadeed tani waxay tahay astaan muujineysa cidda badali doonta Barack Obama.
Tobankii doorasho ee u dambeeyay, waxay shan jeer u codeeyaan xisbiga Jamhuuri iyo shan jeer oo kan Dimuqraadiga ah. Gobolka, North Carolina ayaan xisbi taageerin. 2004-tii waxay u codeeyeen George W Bush, 2008diina Barack Obama, halka ay 2012kii u codeeyeen Mitt Romney.
Dad kala duwan ayaa gobolka ku nool. Madowga codka bixiya, waxay ka walaacsan yihiin kala soocid ka jirta gobolka iyo sidoo kale cadaan aqoon sare leh oo ka yimid Midwest oo shaqo doon ah. Cadaanka saboolka ah ee codeynaya ayaa u janjeera Donald Trump. Dadkani waxay ka shaqeyn jireen warshadaha dharka oo hadda u wareegay Vietnam iyo Bangladesh.
Daawo: Dood kulul oo dhex martay Trump iyo Clinton
Muhiim ayey u tahay Donald Trump rajadiisa aqalka cad inuu halkan ku guuleysto, sidaasina waxaa yiri wariyaha BBC-da Katty Kay.
1-da saacadu marka ay tahay ayey Tv-yada ku dhawaaqi doonaan Pennsylvania. Marka dhinacyo badan oo dhaqaalaha laga fiiryo ayey sida Ohio oo kale tahay Dimuqraadi. Xisbiga Jamhuuriyga lix doorasho oo isku xigta ma helin, laga soo bilaabo 1988-kii. Hadii gobolkan oo dhinaca kale aado waxay xisbiga Dimquraadigu u tahay digniin in Trump guuleysan karo.
Labada habeenimo ayey codeynta gobolka New Mexico xirmeysaa. Waa gobol kale oo laysku dhow yahay oo inta aqlabiyadda ku guuleysata aysan qalad u dhawaanin. Hillary Clinton ayaa ku horeysay cabiraadda ra'yiga dadweynaha ee doorashada.
New York, ayaa isla waqtigaas lagu dhawaaqi doonaa. Hillary Clinton iyo Donald Trump, ayaa si isku dhow loogu codeyn doonaa goblka, waana halka labaduba ku qaban doonaan xafladahooda habeenka doorashada.
Lahaanshaha sawirka BRENDAN SMIALOWSKI
Image caption Trump iyo Clinton waxaa la sheegay in habveenka doorashada ay ku sugnaan doonaan New York
Gobolka ayey Dimuqraadiga ku xoogan yihiin si ka badan Pennsylvania, marka dib loo fiiryo Ronald Reagan ee guushii u dambeysay xisbiga Jamhuuriga, ayey doorashada u muuqataa mid aan saas aheyn.
Saddexda habeenimo ayaa lagu dhawaaqi doonaa saadaasha gobolka Iowa. Inkastoo gobolka looga cadeeyay labo jeer Barack Obama, hadana waxay u muqataa in ay markan Trump dhiciisa tahay.
Gobolka Nevada oo codeyntiisa isla waqtigaas xirmeyso, ayey adag tahay in lagu dhawaaqo. Gobolka ayaa looga codeyn jiray qofka guuleysanaya doorasho kasta ilaa 1980kii. Cabiraadda ra'yiga dadweynaha ayaa muujineysa in natiijada Nevada waqtigan ay taal middida afkeeda.
Afarta habeenimo ayey codeynta xirmeysaa gobolka ugu dadka badan ee California. Doorashadan dhabtii shaki kuma jirto in California tahay gobol Dimuqraadigu leeyahay, balse 55 madaxweynaha u codeyneysa ee gobolka ayey adag tahay in lagu dhawaaqo doorasho kasta ilaa laga ogaanayo halka Golden State uu noqdo.
Goormeen ogaan doonaa cidda madaxweynaha Mareykanka noqoneysa?
Lahaanshaha sawirka Brian Blanco
Image caption Haddi ay guushu suurtagal noqon weydo, waxaa dhaqan ah in musharraxa laga guuleysto uu kan kale u hambalyeeyo
Waa wax lagu yaqaano qofka laga adkaado inuu kan guuleysto waco . Waana suuragal in natiijada isku dhawaato oo uu musharax kasta helo 269 u codeyneysa madaxweynaha. Hadii ay taas dhacdo. Aqalka wakiilada, ayaa go'aamin doono cidda noqoneysa madaxweynaha.
Hadii ay dhacdo isku dhawaasho aan caadi aheyn, waxay lagamamaarmaan ka dhigeysaa in dib loo tiriyo cod kasta taasi oo waqti dheer qaadaneyso.
Waxaa kaloo dib u dhac keeni kara sax ahaanshaha qeynuun sida Florida ka dhacday 2000, xilligaasi oo laysku khilaafay waraaqaha codeynta ee khasaaray.
Tv-yada waa weyn ee Mareykanka sida Fox, CNN, NBC, CBS, iyo ABC ayaa sheegay in Algore uu ku guuleysanayo Florida 2000, balse way ka noqdeen oo George W Bush ayey ku sheegen, hadana way ka sii noqdeen iyagoo ku tilmaamay in muran ka jirto.
Ugu dambeyn waxaa hal cod madaxweyne ku noqday Mr Bush. Sida markaas waa inuu wadanka sugaa ilaa 13ka Desember, si loo ogaado cidda uu yahay madaxweyna soo socda.
Daawo: Trump oo eedeeyay Soomaalida